Ụbọchị My Pet » 7 Jọrọ njọ Eziokwu Banyere Modern dịwara
site Nidhi Mathew
emelitere ikpeazụ: Sep. 23 2020 | 2 min agụ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kemgbe a akụkụ nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ omenala ebe ogologo. Otú ọ dị, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nke taa dị nnọọ iche na ihe ọ na-eji na-n'oge 60s, 70s, 80s na ọbụna 90s.
The biakwa obibia nke Internet na ya ntoputa nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị weebụsaịtị bụ n'ụzọ dị ukwuu maka mgbanwe a. Ezie na e nwere nza nke ihe na-eme ka oge a ụbọchị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mma ma ndị ọzọ na-akpali akpali (online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ n'ezie otu n'ime ha), ọnụnọ nke demerits-apụghị gọrọ agọ kwa. N'okpuru bụ ụfọdụ ihe jọrọ njọ eziokwu banyere oge a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga-ekwe ka ị ga-esi mata na ndị demerits.
1. Ndị mmadụ fọrọ nke nta chefuo gwa onye ọ bụla ọzọ
Easy nkwurịta okwu bụ otu n'ime ndị kasị onyinye na technology nyere ụmụ mmadụ na. Taa, ndị mmadụ na ịhụnanya ga-esi na-akpọ onye ọ bụla ọzọ ọbụna na ha bụ ndị kilomita. Otú ọ dị, a ọganihu nke nkà na ụzụ na-gburu ndị mmadụ nzube ikwu.
Ee, ị na-agụ ya; ọtụtụ ndị taa anaghị-achọsi ịnụ olu nke ha ha hụrụ n'anya, a usoro nke ozi ederede ime ọrụ n'ihi na ha. Gịnị banyere ekwentị oku? Oh, n'ihi na ọtụtụ ndị na ihe ndị gara aga.
2. Ị bụ onye na-, ma ọ bụrụ na ị na-amaghị
Ị chọrọ iji merie onye obi? Taa, kacha ụzọ nke na-eme nke bụ site amaghị. Ị ga-egosi ndị ọzọ mara mma ka gị na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ibe, ma ọ bụrụ na ị na-eche na-erughị. Ụbọchị ndị a, fọrọ nke nta o nweghị onye kwesịrị inwe mmasị ndị mmadụ n'otu n'otu na-egosi mmasị.
3. Jeremaya mere bụ fọrọ nke nta mgbe aghụghọ
Nyopụta Jeremaya mere ndị fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume dị ka ndị nke ugbu ọgbọ na-enwe nchegbu. A onye bụghị mgbe nile masịrị gị behaves n'otu ụzọ ahụ na nwere a yiri anya na ya / ya ihu dị ka onye bụ n'ezie mmasị n'ebe ị. Ọtụtụ ndị na, taa, chefuola otú e si egosipụta mmetụta uche na ha na-eche na ọ bụ ezi àgwà.
4. Ego, ego na ego na mgbe ahụ na-abịa dị
The n'elu bụ eziokwu bụ isi maka ndị ikom; n'ihi na ndị inyom, ọ ga-abụ ụzọ ọzọ gburugburu (anya na-abịa ahụ na mbụ ego). Na mpempe, ma onye ị na-akpa ga-mmasị n'ebe ị na-adabere na ebe ị na-họọrọ dị ka abụọ ndị a ihe na-enwe nchegbu. Ee, naanị abụọ ndị a; ihe ọ bụla ọzọ na-abịa mgbe a.
5. Ihe na kwa haziri na-ihunanya
Taa ahazi ihunanya Hangouts aghọwo kwa mfe. Ị na-eme a ekwentị oku na-enye ọrụ ga-hazie a kandụl ìhè nri abalị n'ihi na ị. Nke a budata adịkwaghị agbapụta na amara onye na-eji na-akpakọrịta na ndị dị otú ahụ atụmatụ na mbụ.
6. Nzuzo? Gịnị nzuzo?
E nweghị ihe ọ bụ onwe banyere akpa taa. I dere a onye n'ehihie na mgbede, unu ga-ahụ foto nke unu abụọ pịrị ọnụ na onye nke ọzọ na-elekọta mmadụ media akụkọ sochiri a usoro nke kwuru na creepy nkebi ahịrịokwu. Ọ bụrụ na ị na-adịghị eji ya, ị na anaghị nwe ọgbọ a.
7. Sị na ọ bụ n'elu ahụ dị mfe ugbu a
Dị nnọọ a ederede na onye gị na ga-amarakwa na unu abụghị ọzọ nwere mmasị na ya / ya. Mgbe ụfọdụ ntisa akụkụ nwere nnọọ a di na nwunye ma ọ bụ okwu. Na-na-agbasa a mmekọrịta mfe etu ahụ n'ezie?
Taa, ndị n'ezie-aghọ ndị ọzọ ndidi na nkịtị; enweghị oge bụkwa isi demon. Otú ọ dị, ọ pụghị ekwetaghị na ha ka chọrọ n'anya ma na-n'anya. Ya mere, n'oge na-adịghị a oge pụrụ abịa mgbe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-aghọ dị ka ihunanya na-akpali akpali dị ka ọ na-eji na-na n'oge gara aga.
3 Atụmatụ maka ihe ịtụnanya Mmekọrịta
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru
5 Dog enyi na enyi echiche maka A mbụ Ụbọchị
5 Ndi na Don'ts ihe ịga nke ọma Online dịwara
6 Mere Ezi Ahụ Ike Bụ Ezi N'ihi Relationships